Hlola iSeychelles - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeSeychelles
Bukela ividiyo ekhuluma ngamaSeychelles
Hlola iSeychelles, iqembu leziqhingi ezingama-115, idlanzana kuphela elakhiwe, oLwandlekazi i-Indian olusogwini lwe-East Africa, enyakatho-mpumalanga ye Madagascar.
AmaSeychelles aphikiswa phakathi France kanye ne-Great Britain ngesikhathi seminyaka yobukoloni, iBrithani yaphetha ngokulawula e-1814 ngemuva kweMpi ka-Napoleonic. Iziqhingi zathola ukuzimela ku-1976; noma kunjalo, ukhetho olukhululekile aluzange lube khona kuze kube yi-1993. Ipolitiki yaleli qembu lesiqhingi ihlala isesimweni sokuncipha, yize lokhu kungafanele kukhathaze izivakashi zifuna iholide lokuphumula leholide.
I-Outer Seychelles. Ama-Outer Seychelles angama-coralline futhi iningi lawo alinamuntu. Izivakashi azivamile; ukuhamba kuhamba nge-yacht yangasese noma i-airstrip eqhelile kumabhanoyi endawo amancane.
AmaSeychelles angaphakathi. Iningi labantu baseSeychelles lihlala kulezi ziqhingi ezingamagogo, lisekhaya ngobuningi bezindawo zokungcebeleka zezwe.
I-Southern Coral Group
I-Mahé (Sainte Anne Island, Cerf Island, Marnelle Island)
IPraslin (Isiqhingi saseCurieuse, i-Aride Island, iziqhingi zaseCousin)
I-La Digue (i-Félécite Island, i-Sista, i-Marie Anne Island)
I-Silhouette Island (North Island)
I-Inner Corallines (iDenis Island, i-bird Island)
Victoria - Idolobha Elikhulu
Indlela okuwukuphela kwendlela yokungena e-Seychelles yi-Seychelles International Airport eduze kwaseVictoria.
Ukushayela eSeychelles kungakwesokunxele komgwaqo. Imigwaqo yaseMahe yimigwaqo ephansi, izintaba, imigwaqo emincane, ngakho-ke kucwayiswa ngokujwayelekile. Imigwaqo ivame ukuba namaconsi amancanyana noma udonga oluphansi ohlangothini esikhundleni sama-curbs, okungenza ukushayela emigwaqweni emincane kukhathazeke, ikakhulukazi uma ushayela imoto enkulu.
Ukuba nemoto kuwumqondo omuhle ngempela futhi kwenza impilo ibe lula kakhulu. Uma uthola igesi engabizi kangako i-100 ungasibona sonke isiqhingi saseMahe ezinsukwini ezimbalwa, kufaka nokuma emabhishi nokunye okungakubamba iso lakho. Kukhona indawo yokupaka yamahhala 'edolobhaneni' laseVictoria eMahe, futhi uma uhamba ne-B&B noma inketho yokuzilungiselela indawo yokuhlala yiyona ndlela elula yokuthola izitolo ezithengisa ukudla. Imoto futhi izokuvumela ukuthi ungene ezitolo lapho abantu bendawo bethenga khona njalo, futhi amanani entengo anengqondo ngokuqhathaniswa nezitolo ezincane ezilula emabhishi.
Ungaqasha kuphela kuMahé nasePraslin. Ungathola imoto encane kodwa ugcine ukhumbula ukuthi okungenani abaqashi kufanele babe neminyaka engu-21, babe nelayisense elivumelekile lokushayela, futhi okungenani babe neminyaka emithathu yolwazi lokushayela. Kunezindlela zokubala zokuqashwa kwezimoto eziningana ngaphandle kwehholo lokufika esikhumulweni sezindiza saseMahe, esinikeza indlela elula yokuqhathanisa amanani. Amanani kungaxoxiswana ngawo, ngesilinganiso esingcono kakhulu esitholakalayo sokuqashwa kwezinsuku ze-3 ezilandelanayo noma ngaphezulu.
Amatekisi ayindlela ethandwayo yokuhamba ngawo wonke amahambo amafushane nokuqashwa kosuku futhi angatholakala cishe noma kuphi. Izintengo zamatekisi zabangeyona izakhamizi ohambweni olude, zingadlula kalula izindleko zokuqasha imoto encane yosuku.
I-Seychelles iyashisa futhi inomswakama, ngokushisa okuphakathi konyaka kwe-29 ° C, futhi okujwayelekile okushisa olwandle kuyaqabukela kwehle ngaphansi kwe-27 ° C. Kodwa-ke, ukushisa kuvame ukwehliswa umoya oqabulayo wolwandle, ikakhulukazi amabhishi. Isizini ebanda kunazo zonke eSeychelles isesizini eseningizimu-mpumalanga (ngoMeyi kuya kuSepthemba) kanti isizini esishisayo sisenkathi yasenyakatho nentshonalanga (ngoNovemba kuya kuMashi). U-Ephreli no-Okthoba “izinyanga zokushintsha” phakathi kwezilo ezimbili, lapho umoya uguquguquka. Isikhathi sonyaka osenyakatho ntshonalanga sivame ukufudumala nemvula eyengeziwe, kanti isizini laseningizimu-mpumalanga livame ukuna futhi kupholile.
Izilimi ezikhulunywa eSeychelles yiSeychellois Creole, isiNgisi nesiFulentshi. Ngamandla amancane kakhulu esiFulentshi noma esiNgisini uzokwazi ukuzungeza okuhle, futhi kuzosiza umzamo omncane, ngisho nemisho embalwa eyisisekelo.
I-Seychelles ayaziwa njengendawo yokuya emasikweni, kepha labo abasebenzisa lonke iholide labo olwandle bayaphuthelwa ukubona izinto eziningana ezithokozisayo.
Ithempeli le-Arulmigu Navasakti Vinayagar ku Victoria yisikhungo sobuHindu esiqhingini. Ithempeli lihlotshiswe kahle futhi nemikhosi yethempeli iyajabulisa ukubona. Izivakashi zamukelekile, futhi ukuthwebula izithombe okuvunyelwe kuvunyelwe. Izicucu zezinyawo kufanele zisuswe futhi zishiywe ku-vestibule. Sicela ucime ifoni yakho futhi ugweme ukukhuluma kakhulu.
I-Seychelles Museum Museum Museum ku Victoria incane, ayibizi futhi iyathakazelisa. Izivakashi zizofunda ngobungako obuhlukile kanye nendawo okuhlala kuyo iziqhingi.
Idolobhana lentsha elonakalisiwe laseCap Ternay lisendaweni yokugcina umgwaqo omncane onqenqemeni eMahe. Le ndawo ethule futhi enhle kakhulu ithokozelwa yilabo abachitha isikhathi esincane ngaphambi kokufunda ngomlando wale ndawo.
IVallee de Mai esePraslin yipaki kazwelonke nendawo yamagugu omhlaba, ikhaya lezimbali ezimangalisa kakhulu nezilwane, kufaka phakathi imbewu enkulu kakhulu emhlabeni: i-coco de mer. Izindlela ezikude kude nendawo yokungena azixinani kangako futhi zinikeza ukubukwa okuhle kakhulu, kepha zingaba zixinile futhi ziwugxuma. Gqoka izicathulo eziqinile futhi ulethe ibhodlela lamanzi. Futhi kungumqondo omuhle ukuqala ukuvakasha ngokuvakasha okuqondisiwe ukuze wazise ngokugcwele izici ezihlukile zepaki.
Amabhishi aseSeychelles nawo ahle enza eminye imisebenzi ngaphandle kokubhukuda nokusoka. Ikakhulu ngesikhathi sokukhula okuphansi umuntu angabona izilwane zasendle ezihehayo lapho. Thola ibhishi elahliwe bese uhamba ngokuthula, futhi ungahle uvuzwe ngokubona iziphisi zomsuka, ukuqhuma kwezinsimbi, izinhlanzi ezindizayo nezinye izinhlobo eziningi zezilwane.
Vakashela amabhishi. Amabhishi amaningi awathintwa yithonya lomuntu futhi aqabula ngokungenamuntu. Banikeza isibhakabhaka esicwebile esibhakabhaka nokuthula ongeke ukuthole. Ukuhamba ngezinyawo ogwini olusuka eBeau Vallon kuya ku-Anse Major kuzothatha amahora angama-1.5-2 kanti umvuzo wakho uzoba ulwandle oluncane olugwadule olufanele inkosi. Indawo ekhombisa ukugcwala intaba iyamangalisa. Akuwona wonke amabhishi alungele ukubhukuda kuya ngesikhathi sonyaka, ngenxa yemimoya yonyaka. Ungazinaki izimpawu eziyisixwayiso ezibonisa ukuthi ugu luyingozi yokubhukuda, noma ngabe lubukeka kanjani kuwe.
Izimo ezisemabhishi zincike emandleni nasekuhanjisweni komoya, ukungabikho noma ukuba khona komfula ovikelayo kanye nokuguguleka. Umuntu akufanele akhathazeke, nokho, ngoba iSeychelles inamabhishi ngobuningi, futhi uma izimo ezisebhishi linye zingalungile, ugu lolwandle olusezingeni elifanele lungahamba kuphela imizuzu eyi-5.
I-Aldabra Atoll: Umgwaqo omkhulu wamakhorali emhlabeni osuka kumakhilomitha angama-22 usuka empumalanga uye entshonalanga futhi uvalele ichibi elikhulu lamanzi. I-Aldabra iyikhaya loqobo lwefudu lomhlaba omkhulu kanye nama-tiger oshaka kanye nemisebe ye-manta nayo ingabonakala lapha.
I-Watersports: Amanzi afudumele e-Indian Ocean enza ama-Seychelles abe indawo enhle yabathandi bamanzi. Hlola esikebheni se-yacht, isikebhe samandla, i-catamaran noma isikebhe sesikebhe. I-Windsurfing nayo iyathandwa futhi isikhathi esihle salomsebenzi uvame ukuzungeza ngoMeyi bese kuthi ngo-Okthoba, ekuqaleni nasekupheleni komoya wokuhweba.
I-Scuba diving, snorkeling, kanye nokudoba nayo ithandwa kakhulu futhi ingenziwa cishe noma kuphi eSeychelles. I-Baie Ternay iyindawo enhle kakhulu futhi itholakala kalula ngohambo lwesikebhe esingaphansi kwesikebhe kusuka ebhishi laseBeau Vallon - shiya usuku olungenalutho bese uhamba ebhishi 'ukubhuka ngomzuzu wokugcina' - amadili amahle angahlaselwa. Ukushushumbisa (inqobo nje uma unamagiya akho - amanye amahhotela aboleka imaski, izidleke kanye namachaphaza ezivakashini) KUMAHHALA futhi kukhona izindawo eziningi ezinhle: kwamanye amabhishi amancane eGlacis, esedlule seMouse Island e-Anse Royale, edwaleni ePort I-Launay (eduzane ne-Ephelia Resort). Imvamisa ibonwa yizinhlobonhlobo zezinhlanzi zasezindaweni ezishisayo, izimfudu zolwandle, imisebe yokhozi nokuningi!
Imidlalo Yezemihlaba: Igalofu, ithenisi, isikwashi, i-badminton, ukugibela amahhashi, ukuhamba ngamabhayisekili kanye nokuhamba ngezinyawo kungenye yeminye yemisebenzi yokuzijabulisa etholakala eSeychelles Islands. Ukuqashwa kwebhayisekili nokuhambela izinkambo kuyindlela enhle yokubona indawo futhi njengoba amabanga emfushane futhi indawo enhle inhle, ukuhamba mhlawumbe kuyindlela enhle yokubona iziqhingi ezincane (iLa Digue, Praslin), ngenkathi uhamba ngomgwaqo omkhulu kungesabisa kakhulu njengoba imigwaqo incane futhi izimoto zasekhaya / amabhasi ahamba ngokushesha okukhulu. KuMahe ayulekwa ukuba ugibele amabhayisekili, futhi azikho izitolo eziqeshwayo ngaphakathi ezibonakalayo. Ukubuka izinyoni kuyathandwa futhi iziqhingi ziyikhaya lezinhlobo eziningi zomhlaba ezaziswa kakhulu nezingavamile kakhulu ezilwaneni. Indawo engcono yokwenza lokhu iCousin Island okuyi-1 km kuphela ububanzi, iyikhaya lezinyoni ezingaphezu kwe-300,000, kepha izinhlobo eziningi ezihlukile zitholakala ngokukhululeka eMahe.
Ubusuku Basemini: Ungaphuthelwa i-Nightclub edumile i- "Lovenut" enkabeni yeVictoria, amamitha we-100 ahamba ngezinyawo esuka esiteshini samatekisi. Okunye okuzijabulisa yi- “Tequila Boom” e (Bel Ombre) nase- “Katiolio” (eduze nase-Anse Royale) amakilabhu ebusuku. “I-Katiolio” ibingelinye lamakilabhu okuqala ebusuku ukuvula iMahe futhi isikebhe umoya ovulekile oseceleni kolwandle.
Ukuhamba ngezinyawo. Kunemigwaqo eminingana egcinwe ezintabeni esiqhingini esikhulu saseMahe nabambalwa ePraslin. Ihhovisi lezokuvakasha laseSeychelles linezincazelo ezimbalwa zezindlela zokuhamba izintaba ngamamephu athengwayo.
AmaSeychelles anezimakethe eziningi, imidwebo yobuciko nezitolo, izindlu zamapulangwe zekoloni yesiCreole, futhi isiqhingi esikhulu saseMahé sineminyuziyamu eyisithupha, ingadi yezitshalo kanye nezikhumbuzo zesizwe eziningana. Imakethe yedolobha laseVictoria inokukhethwa okuhle komkhiqizo wasendaweni, nezinongo zokuthengisa ezithengiswa konke okukhona kanye ne-100% iyiqiniso.
Imali yeziqhingi lezi yisiqhotho seSeychelles (SCR). Ukuthola amanani amahle kakhulu, sebenzisa amakhadi wesikweletu ngangokunokwenzeka, futhi uthole imali yakho kuma-ATM. Kodwa-ke, kuyenzeka ukuthi uthenge ama-rupees esikhumulweni sezindiza nasemabhange amaningana. Amakhadi wesikweletu namakhadi okudonswa kwemali aseYurophu amukelwa kabanzi, ngaphandle kokuphawuleka kweziteshi zikaphethiloli. Uphethroli kumele ukhokhwe ngemali.
Indawo enhle yezitolo iVictoria, inhlokodolobha, futhi ikakhulukazi imakethe enkabeni yedolobha. Kukhona nezitolo ezimbalwa esiqhingini, iPraslin, kodwa kunezindawo ezimbalwa zokuthenga kwezinye iziqhingi. Amahhotela amakhulu anezimbali kodwa ukuthenga eSeychelles akuyona enye yezinto ezikhangayo.
Izitolo ezincane zokudla, ezivame ukwenziwa ngumphakathi wamaNdiya, zitholakala kuzo zonke iziqhingi. Lokhu, nokho, akubizi kakhulu, futhi kunambitheka okuncane noma akukho ndawo. Uma uzenzela ngokwakho, i-hypermarket enkulu emaphethelweni we Victoria inketho. Isitolo esikhulu siyisicefe, kodwa futhi siyasebenza futhi asibizi.
Ngenkathi uvakashela, qiniseka ukuthi uthenge ama-Seychelles wesikhumbuzo yasendulo neyejwayelekile, i-coco-de-mer, noma i- 'nati yolwandle,' i-nati evela ezihlahleni zomdabu eziqhingini eziseSeychelles - kepha lokhu kudinga ilayisense yokuthumela kwelinye izwe. Ezinye izikhumbuzo ezenziwe endaweni, noma zingahlukile, zingathengwa njengamagobolondo olwandle nobucwebe belearl, izindwangu nezigqoko zotshani, ngaphezu kokwenza umsebenzi wobuciko kanye ne-crochet, imidwebo yenziwa ngabadwebi bendawo kanye nokhuni.
Ukudla kwaseSeychellois kuthonywe kakhulu amasiko achuma kulezi ziqhingi. Ukupheka kwamaCreole okudla kwasolwandle okuhlukahlukene, ukhukhunathi kanye nama-curries yiwona athandwa kakhulu. Umkhiqizo omkhulu wezwe, inhlanzi, uphekwe ngezindlela ezahlukahlukene. Ikakhulu i-snapper ebomvu inambitheka kakhulu futhi iyaziwa kakhulu kubavakashi.
Ukudla okushibhile: Qoqa ukhukhunathi ebhishi futhi ufunde ukuthi ungasivula kanjani isembozo sabo esibuhlungu (hhayi igobolondo, lokho kulula; banesembozo esindayo semicu yemvelo; ukusivula: shaya kakhukhunathi ngamandla amaningi emaphethelweni, kungekudala noma ngokuhamba kwesikhathi imicu ihlukana).
I-Seychelles inikeza umbono omnandi wobusuku bokuhlwa obufika kubavakashi. Ubusuku obusebenzayo butholakala kakhulu emahhotela amakhulu futhi ngaphezu kwezinkundla zemidlalo yeshashalazi nama-disco, kukhona izindawo zokudlela eziningi ezimnandi nezishisayo.
Uma ujabulele ubhiya omuhle kufanele uzame ubhiya wasendaweni waseSeybrew, unambitheka njengobhiya wesitayela waseBavaria okhanyayo futhi kufanele ukwenze ngalezozinsuku ezigcwele kamnandi. Ungazigcinela ipakethe uthenga ubhiya ezitolo eziseceleni komgwaqo njengoba abantu bendawo benzani kunokuba busehhotela. I-Takamaka Rum emnyama ebhishi ngaphansi kwezinkanyezi iyindlela engcono kakhulu yokuqeda usuku kumaSeychelles.